E kewara usoro ntinye ntinye na ọrụ ọrụ Chuangmei n'ime ụzọ abụọ ndị a
1. Basic nwụnye ọrụ nduzi:
1) Mgbe ebuchara ngwa ọrụ na ihe ndị ahụ gaa na saịtị ahụ, onye ọrụ ngo ọ bụla ma ọ bụ nke nrụnye na-ahazi ibudata na ntuziaka nke ndị ọrụ aka ọrụ anyị, ma chebe ngwaahịa ndị agwụla na saịtị ahụ. Mgbe ebuputachara akụrụngwa a, ndị ọrụ anyị ga-esoro onye isi ọrụ ngo ma ọ bụ ngalaba nrụnye na ndị ọrụ ngalaba ndị ọzọ iji lelee ma nyochaa akụrụngwa ahụ.
2) Nkọwapụta teknụzụ na ọrụ nkọwapụta teknụzụ ga-ebu ụzọ tupu echichi akụrụngwa. Ndị ọkachamara anyị ga-arụ ọrụ nyocha nke ọma maka usoro ntinye akụrụngwa na eserese ntinye ihe na ihe ndị ọzọ iji hụ na ndị nrụnye nwere ike iwunye akụrụngwa ahụ n'enweghị nsogbu ma nwee ntụkwasị obi.
3) Dabere na atụmatụ ntinye akụrụngwa, onye isi ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nrụnye bụ ọrụ maka ịkwado, ịgbado ọkụ, na ntinye nke akụrụngwa ahụ, ndị ọkachamara anyị na-enyekwa nduzi ọrụ ntanetị. Mgbe arụnyere akụrụngwa ahụ, ndị ọrụ aka anyị ga-enyocha ogo nrụnye akụrụngwa ma duzie nyocha dị mma na akụrụngwa niile arụnyere na saịtị iji hụ na arụnyere akụrụngwa ahụ n'ụzọ ziri ezi.
4) Nbanye na nnabata mbụ: Mgbe arụchara ngwa ọrụ ahụ, ekwesịrị inye ya, gụnyere ọrụ ọrụ yana ọrụ ọrụ kemịkal. Companylọ ọrụ anyị ga-ekenye mmadụ pụrụ iche ịkwado ma duru onye isi ọrụ ga-arụ ọrụ a. Mgbe ị nyechara ọrụ, ule na nhazi ruru eru, Gaa na usoro nnabata nke mbido dịka ndokwa ahụ si dị. Anyị ga-enye akụkọ ntinye ọrụ nke akụrụngwa n'oge dịka ihe ndabere maka nnabata mbu.
5) N'ime usoro ntinye ngwa ngwa niile, onye njikwa ọrụ na-arụ ọrụ ntinye mgbe niile. Onye oru ngo a bu oru maka nhazi oge, ichikota na ichikota ya na ndi oru uzo na saịtị, ihe omuma ihe oru Ze Ze, ihe omuma na ihe di nma, na igha ndi ahia maka nhazi na imekorita.
6) N'ime usoro ngwa ngwa niile, onye ahịa kwesịrị iziga opekata mpe ndị ọkachamara 2 iji soro ma mụta ihe ọmụma banyere akụrụngwa na akụrụngwa.
7) N'ime oge nbibi akụrụngwa, onye ahịa kwesịrị iziga opekata mpe injinia kemịkal 2 iji soro ma mụta banyere teknụzụ imepụta glove.
2. Production akara echichi ọrụ:
Dịka mkpa nke ndị ahịa dị iche iche, Chuangmei nwekwara ike ịnye ọrụ nrụnye maka usoro mmepụta, ya bụ, Chuangmei na-akwụ ụgwọ ụgwọ nrụnye metụtara ma na-enye ọrụ nkwụsị maka ntinye ntinye na ntinye ọrụ. Uru nke ọrụ a bụ na Chuangmei na-achịkwa ọganihu nwụnye ma belata ọtụtụ nsogbu. Nkwukọrịta dị mkpa na igbu oge na-arụ ọrụ nke ọma ma na-ekwe nkwa ịdị mma.